कर्मचारी भनेका शासक हुन् भन्ने एकताका थियो, अहिले छैन् : मेघनाथ पाध्या (भिडियो) « Mayadevi Online News Portal
कर्मचारी भनेका शासक हुन् भन्ने एकताका थियो, अहिले छैन् : मेघनाथ पाध्या (भिडियो)
प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७६ आईतवार ०७:०१
मेघनाथ पाध्या । बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत । नेपाल सरकारका उपसचिवस्तरका कर्मचारी । पाध्या कपिलवस्तुमा लामो समय देखि सरकारी कर्मचारीको रुपबाट जनताको सेवामा तत्लिन हुनुहुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तौलिहवामा शाखा अधिकृत, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई काम गरिसक्नुभएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटाको प्रमुख भएर झण्डै दुई बर्ष सेवा गर्नुभयो । अहिले बुद्धभूमि नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा हुनुहुन्छ ।
देशमा अहिले नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ । देशमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण सोचेजस्तो विकास हुन् सकेन् । यसभन्दा अगाडीका चुनावमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत थिएन । मिलिजुली दलहरुले सरकार चलाए । सरकार नौं नौं महिनामा परिवर्तन भए । जनता यसले आजित बने ।
अहिले संविधान जारी भएसंगै देशमा तीन तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय, प्रदेश र संघका प्रतिनिधि बनाएर जनताले पठाए । तीन सरकार मध्ये केन्द्र र प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्पष्ट बहुमत छ । स्थानीय तहमा पनि नेकपाकै बर्चश्व छ ।
राजनीति दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएर सरकार चलाए पनि जनताको काम उहि पुरानै शैलीबाट हुँदै आएको छ । अझ देशमा भष्ट्रचार बढेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ । जनताको काम छिटोछरितो हुन नसक्नुको प्रमुख कारण कर्मचारी हुन भन्नेहरु छन् । देशका स्थायी सरकारका रुपमा रहेका कर्मचारीहरुले किन जनतालाई बुज्न सक्दैनन् ? किन जनतालाई कर्मचारीले दुःख दिन्छन् ? भष्ट्रचारमा किन बृद्धि भैरहेको छ ? यहि सेरोफेरोमा आधारित रहेर मायादेवी टिभी र मायादेवी अनलाइन डटकमका लागि मेघनाथ पाध्यासंग कुराकानी गरेका छौं ।
चढेको जीप खोलाले बगायो, बेगमा हाम फालेकी कोपिला यसरी बाँचिन् (भिडिओ)
कपिलवस्तुमा विद्युत प्राधिकरणको जीप बाढीले बगायो (भिडिओसहित)
अनिता पासी मृत्युप्रकरण थप रहस्यमय, माइती पक्ष भन्छनः छोरी मारिएकै हो (भिडिओ)
श्रीमतीले छाडिन्, तनावले सोनुले प्राण त्याग गरे (भिडिओ)